10 Ụzọ Zọpụta Youku dị ka MP3
Youku.com bụ ihe kasị adored video hosting weebụsaịtị na China dị ka ụzọ Youtube bụ n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. N'otu aka ahụ, ọ bụ ndị mmadụ na-ahụ na ọ a bit cumbersome mgbe ọ na-abịa converting videos site na nke a ma ama na saịtị ahụ na ha mmasị usoro. Isiokwu a ga na-agbalị ghọtakwuo otú otu onye nwere ike tọghata Youku videos ka MP3 usoro. N'ezie, e nwere ọtụtụ nhọrọ na ị pụrụ agbalị si n'ebe ma anyị ga-a lee anya na dị nnọọ ma ole na ole kasị nkịtị na nnọọ obi ụtọ usoro.
Otu n'ime ndị kasị oru oma ụzọ converting Youku ka MP3 bụ site na iji a Youku Downloader. Nke a bụ otu na ọ bụghị nanị media Downloader na chepụtara na-arụ ọrụ kpọmkwem Youku.com. Ọ bụghị nanị na nke a software ịrụ ọma na-azọpụta ndị videos-amasị gị n'ime kọmputa gị ma ọ ga-na-arụ ọrụ admirably ọma na converting video ọ bụla nke chọrọ mmepụta usoro. All onye nwere ime bụ họrọ ya ma ọ bụ ya mmasị na nke a na-MP3 Ọkpụkpọ na ị na-eme! The interface dịkwa nnọọ enyi na enyi, m ga-ekwu. The software bụkwa ngwa ngwa maka download n'efu si dị iche iche na isi mmalite gụnyere cnet.com.
2.Free Video Ntụgharị
E nwekwara nnọọ mma weebụsaịtị na-bụla ghara imeri mgbe ọ na-abịa video akakabarede. Otu nhọrọ na m ga-ukwuu nwere ike ikwu maka nke a ozi bụ http://www.free-videoconverter.com/. Na nke a dịruru ná njọ, ihe niile ị chọrọ ime na-bulite a nyere video na unu ebudatara ma ọ bụ kama zọpụta na kọmputa gị ma tọghata ya! Dị nnọọ jide n'aka na ị na-ahọrọ MP3 nhọrọ dị ka ndị chọrọ mmepụta usoro. Olee otú mfe bụ nke ahụ? The interface dịkwa nnọọ forthcoming otú dị mfe iji. Unu ekweghị ya? Lelee screenshot n'okpuru. Ọzọkwa, dị ka nke ikpeazụ njikọ na-egosi, website bụ n'efu.
My ndepụta agaghị-ezu ezu ma ọ bụrụ na m na-ekwu banyere wondershare allmytube software! Ma ọ bụ Ka dị nnọọ asị na m ga-eleghị anya ọ bụghị ịdị na-eme ị a amara ahapụ dị ike otú ahụ video akakabarede ngwá ọrụ na ndepụta a. Ị nwere ike inweta ohere ka a n'elu ikpo okwu nanị site na ịpị njikọ www.wondershare.com na nbudata na software.
Nke a software dị maka kọmputa-agba ọsọ na Windows na Mac n'elu ikpo okwu. The downside na ngwá ọrụ a bụ eleghị anya eziokwu na ị ga-mkpa azụ software etolite-ere ma dị na mbụ ihe ọma niile na-abịa na a na-eri. Mma nke ihe n'ebe a bụ na ị ga-enweta ohere a free ikpe oge dị nnọọ bụrụ na ị na-na doro anya na àgwà nke ngwá ọrụ. Na-Frank, Wondershare-arụ ọrụ ebube mgbe ọ na-abịa Youku video akakabarede na downloads-nke a bụ ghara ikwu ya pụtara na egwu ihe ndekọ n'ógbè nke Youtube video akakabarede. M nzọ Ị ga-agaghị emechu ihu na ikpe software ka naanị zuru software!
YTD video Downloader bụ otu ndị ọzọ ezigbo ngwá ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na nbudata na vidiyo si na ọtụtụ weebụsaịtị gụnyere Youku.
The software bụkwa mfe dị kpam kpam na ọtụtụ ndị na saịtị gụnyere dị ka www.ytddownloader.com na www. cnet.com. Ị ga-Otú ọ dị ike a chọrọ iji azụ otu kwa afọ ikike ọ bụrụ na ị ga-enwe zuru ùgwù -full ikike. The price dịtụ ọnụ ala agbanyeghị nyere na ọ bụ naanị 29 $ kwa afọ! -Eme mgbakọ na mwepụ na nke na-abịa gburugburu abụọ na ọkara dollar a n'ọnwa nke bụ na ọjọọ ewere n'ime akaụntụ uru ị ga-mubanye na ngwá ọrụ a.
5.Any Video Ntụgharị
The ọzọ software na m agbasaghị n'anya a otutu bụ ihe ọ bụla video Ntụgharị. Nke a bụ otu ewu ewu software na ọma na ogbe akakabarede
albeit na yiri etoju nke ịga nke ọma na mmịpụta nke ọdịyo iyi si video faịlụ. Ọ ga-abụ na nọ nke Ị tube, Youku ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ yiri Bochum weebụsaịtị, software ejisie ịnapụta àgwà itoolu nke ugboro iri! Ọ bụ software na ndepụta na e mepụtara maka ma Mac na Windows nke eleghị anya na-akọwa ya ewu ewu na ahịa. Ọ na-akọwa ihe mere ọ bụla video Ntụgharị na-gosiri ukwuu site na ọrụ gafee n'ụwa. Ngwá ọrụ a bụ N'ezie, otu nke ngwaọrụ nke oke na Youku video akakabarede na downloads.
www.anything2mp3.com bụ ihe ọzọ na online Ntụgharị na kwesịrị na-na ndepụta a. Ọ bụ a website na specializes na ntughari nke vidiyo si na weebụsaịtị ka MP3 naanị. All onye nwere ime bụ Tapawa video njikọ na convertes igbe gosiri n'okpuru na pịa tọghatara tọghata video ka chọrọ mp3 format-ọ bụ na starightforward na mfe.
Akakabarede bụkwa ngwa ngwa dị ka ọ na-emekarị na-ewe a nkeji ma ọ bụ abụọ dabere na ogologo na size nke video na-converted.
7.Xmlbar video Ntụgharị
Xmlbar video Ntụgharị bụ otu ọzọ software ị ga-agbalị na youko video akakabarede.
Ọ boosts nwapụtaworo na ike na videos nke a sara mbara n'usoro nke formats N'ihi ya, ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu na Youku video format .Onye software nwere oké akakabarede ọsọ tinyere site ikike iji tọghata multiple faịlụ enweghị ọtụtụ nke a fuss.This Ntụgharị bụ free na ike ga-downladed si xmlbar .NET.
Na-ekwu okwu nke ọnụ ala ma na mfe iji weebụsaịtị maka video akakabarede, wap4.org bụ otu nke kasị mma si n'ebe.
Dị nnọọ ka ọtụtụ ndị weebụsaịtị n'elu, ị ga-bulite youku video ma họrọ mp3 format wee pịa na tọghata. The website Otú ọ dị ókè faịlụ uploads a kacha nke 100MB kwa faịlụ. Ka ọ na-otu ezigbo nhọrọ.
9.FLV ka mp3 Ntụgharị
FLV ka mp3 Ntụgharị bụ ihe ọzọ na ngwa na-ga-eme ukwuu converting youku videos.
Àgwà nke mmepụta nke a ngwa nwere ike mfe ike gbanwee site n'ịgbanwe akụkụ dị ka bit ọnụego na otú pụta. Ị nwere ike ịzụta na sofware maka gburugburu 40 $ -one oge ego.
10. Iskysoft Video Ntụgharị
Ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, e nwere ihe iskysoft video Ntụgharị a producy nke iSkysoft.
The sofware bụ nnọọ na-enye na ma Mac na Windows na mmịpụta nke ọdịyo si video faịlụ na a nso nke mmepụta presets kachasị maka kasị obere ngwaọrụ. Nke a bụ ngwá ọrụ na-arụ ọrụ na a elu ogo arụmọrụ ke ntughari nke Youku videos. Ya àgwà na-abịa na a price nakwa nyere ka ọ na-efu gburugburu maka dollar.
Ugbu a na ị maara iri kasị palatable ngwá ọrụ na weebụsaịtị nke ga-eme ka ndụ gị na youku enweghị nkebi.
5 Extraordinary ụzọ mee ka a YouTube Video
Tudou Downloader: Olee otú Download Tudou Videos
Olee otú iji tọghata VLC ka MP3?
Olee otú Wepụ MP3 Audio si QuickTime (MOV)
> Resource> MP3> 10 ụzọ zọpụta Youku dị ka MP3